Warshad Shukulaato - Soosaarayaasha Shukulaatada Shiinaha, Alaab-qeybiyeyaal
Hoteelka Sanying Spa
Dhismaha Shenzhen Microsoft Koton
Saldhiga Tareenka ee Waqooyiga Shenzhen
100 Keilor Road, Essendon, VIC 3041, mashruuca Melbourne
Xarunta Kubadda Koleyga ee Dongguan
Dukaanka flagship Beijing LV
SC-1606 ahama shabaggeedii ahama iyo bulaacada ay samaysay soo saaraha shiinaha
* Si xirfadeysan ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha.
* Tilmaamaha alaabada guud waxay tixraacayaan kuwa soo socda.
* Hawo-qaadista, iftiiminta, kuleylka kala-baxa, aan-siibiqsanayn, oo aan caddayn qarax.
* Si fudud loo rakibo loona kala furfuro.
* Qaabku wuxuu noqon karaa macaamil.
SC-1604 Anti-daxalka ahama Steel shabaggeedii iyo Dheecaan sameeyey warshad Shiinaha
* Badeecadani waxay leedahay awood xamuul oo aad u saraysa oo leh hantida ka hortagga saamaynta.
* Daboolka iyo jirku waxay ku xiran yihiin fiiq. Waa anti-xatooyo, ammaan ah, oo si fudud u furan.
* Haddii loo isticmaalo birta, Aag ballaaran oo biyo daadinta leh diirimaad diirran oo diirran oo diiran, soo jiidasho leh oo waara.
* Muuqaal qurux badan, dusha dhalaalaya
* Nooca shabaggeedii birta ahaa
W-cadaadis shabag shabag leh
L-cadaadis shabag shabag leh
Shabakadda alxanka alxanka
Qalabka Dhismaha Birta Xirfadlaha ah ahama shabaggeedii ahama
Shabaggan birta birta ah waa mid ka mid ah noocyadeenna ugu caansan, oo ay sameysay naqshadda laanta Saddex-xagalka. Naqshaddani waxay leedahay faa'iidada ah inay ka dhigto farqiga dusha sare, laakiin biyuhu waxay si habsami leh u barbar dhigi doonaan nooca caadiga ah. Dusha sare ayaa xitaa badbaado u leh kabaha cidhibta dheer ee khafiifka ah inay ku socdaan.
Qalabka Dhismaha Tayada Sare 304 ama 316 Ahama ahama Steel shabaggeedii ahama
Dahaarka birta ahama, waxaa loogu talagalay inuu noqdo safaf badan oo godad fidsan, xarrago leh oo kooban oo leh farsamo wacan Fiican waxaa ugu horreyn loo adeegsadaa gudaha iyo daaqadeena. Ahama shabaggeedii steel waxaa laga heli karaa in noocyo kala duwan oo naqshad loogu talagalay nidaamka qurxinta iyo dheecaan, kulmi bilicsanaanta iyo wax ku ool ah oo dhan ka mid ah.
SC-1607 Kanaal sifeysan oo sifeysan oo loogu talagaly Daboolka godka qulqulka Bullaacadda birta ahama
Ahama shabaggeedii steel, sidoo kale loo yaqaan Welded ahama Steel Bar Grate waa u fiican farsamo fiican oo adkaysi u leh dhammaan codsiyada culeyska xambaara waxaana ugu horreyn loo adeegsadaa gudaha iyo dibedda. Ahama shabaggeedii steel waxaa laga heli karaa noocyo kala duwan oo dheellitirka bar iyo dhumucdiisuna waxay ku xiran tahay codsiyada iyo shuruudaha load.
Qaab gaar ah ahama Steel shabaggeeda biyaha haanta biyaha channel Shiinaha Factory
Noocan shaashadda birta ah ee birta ah waxaa lagu sameeyaa naqshad culus oo culus si loogu qanco in laga ilaaliyo daxalka, iyadoo la hubinayo cimri dherer iyo isku halleyn. Waxaa lagu sameeyaa tayo sare leh 304 ama 316 bir birta ah oo leh farsamo wanaagsan.
Cuskado, Qaybaha toosan ee gacanta, Saxanka Saldhig gacmeed, Qeybta jaranjarada jaranjarada, Ahama cuskado, Dahaarka ahama Steel wiishka,